वास सम्वाद – WASHKhabar
यी हुन् खानेपानीको लक्ष्य हासिल गर्ने अचुक उपाय : आयोजना प्रमुख धितालसँग भिडियो वार्ता
काठमाडौ : सरकारले खानेपानीमा राखेको लक्ष्य अपेक्षाकृत रुपमा हासिल गर्न सकेको छैन । खानेपानीमा राखेको दिगो विकास लक्ष्यको पुनरावलोकन गर्ने हो भने यत्तिबेला सुरक्षित पानी पिउने जनसंख्या ५० प्रतिशत पुगिसक्नु पर्थ्यो । तर सुरक्षित पानीको पहुँच पुगेको जनसंख्याको प्रतिशत बढ्नुको सट्टा क्रमशः घट्दै गएको छ । हाल नेपालमा सुरक्ष...
काठमाडौ : २०७४ असारसम्म केन्द्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र थियो, जसले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्थ्यो । स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियम बनाउने यो केन्द्र संघीयता कार्यान्वयन सँगै खारेज भएपछि केन्द्रिय तह...
नदीको पानी लिफ्टिङ गर्नु अघि सिलिका, लेड जस्ता तत्व कति छन् ? अनुसन्धान हुनुपर्ने (भिडियो)
काठमाडौ : बस्ती भन्दा माथिल्लो सतहमा रहेका पानीका स्रोतहरु धमाधम सुक्दैछन् । यसको समाधानका लागि भन्दै बस्ती भन्दा तलतिरबाट बहने खोला तथा नदीबाट पानी लिफ्टिङ गरी खानेपानीको आपूर्ति गर्ने अभ्यास जहाँतही चलिरहेको छ । खोला तथा नदीबाट पानी लिफ्टिङ गर्दा धेरै कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने काठमाडौ विश्वविद्यालयका रिज...
आठ सय राँगाभैंसी बध गर्दा निस्कने दैनिक ५० टन लादी कहाँ जान्छ ? यसको समाधान के हुनसक्छ ? वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठसँग भिडियो सम्वाद
काठमाडौ : काठमाडौ उपत्यकामा खपत हुने मः मः, छोइला, सेकुवा, सुकुटी जस्ता मासुजन्य पदार्थका लागि दैनिक ८ सय राँगाभैंसी बध गरिन्छ । यस्तै १५ सय खसीबोका, ७० हजार किलो कुखुरा, २ सय सुँगुर र ७ हजार किलो माछा खपत हुन्छ । राँगाभैंसीको जिउँदो तौलबाट करिब ४०/५० किलो त लादी मात्र निस्किन्छ । काठमाडौमा खपत हुने चौपाया तथा पखेरु...
पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन हुन्छ, यसले अर्को फड्को मार्छ : उपमहानिर्देशक कँडेल
जुन दिन नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो, त्यही दिन अर्थात २०७६ असोज १३ गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई पूर्ण सरसफाइ तर्फ अग्रसर नेपाल पनि घोषणा गर्नुभएको थियो । तर खुला दिसामुक्त अभियानको यात्रामा हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको सरकार, विकास साझेदार, दातृ निकाय र विभिन्न संघसंस्था न...
शौचालय प्रयोग नगर्ने ५ प्रतिशत नागरिकलाई सरसफाइको पहुँचमा ल्याउन सरकार क्रियाशील छ : महानिर्देशक खत्री (भिडियो सम्वाद)
काठमाडौ : सबै नेपालीको घरमा शौचालय निर्माण भई खुला दिसामुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणा भएपछि सरसफाइ क्षेत्रले थकाइ मारे जस्तै छ । सरकारको अगुवाईमा ‘एक घर, एक शौचालय’ को नारा दिएर सरसफाइमा हातेमालो गर्दै हिडेका विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज अहिले तितरबितर भएका छन् । तत्कालीन समय...
जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले ढल सहित कि ढल रहित प्रणाली उत्तम ? काठमाडौ विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक डा. घिमिरेसँग भिडियो सम्वाद
काठमाडौ : स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा हालै सम्पन्न कोप २६ सम्मेलनमा सहभागी झण्डै २ सय राष्ट्रहरू जलवायु संकट रोक्न सहमत भएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको मुख्य स्रोत कोइलाको प्रयोग घटाउने विषय उल्लेख गरिएको छ । कोइलाको प्रयोग घटाउने सम्बन्धी यो पहिलो सहमति हो । ...
राजधानी शहर लगायतका शहरी र बजार क्षेत्रहरुमा सार्वजनिक शौचालयको बिजोग हुनु अब नौलो विषय रहेन । आपतकालीन अवस्थामा बाहेक यी सार्वजनिक शौचालय प्रयोग योग्य छैनन् । फोहर शौचालय हुनु शौचालय नहुनु बराबर नै हो । संख्यामा सार्वजनिक शौचालय पुगेन भनेर निक्कै चर्चा गरिन्छ तर भएका शौचालयहरुको गुणात्मक सुधारमा कसैको ध्यान गएक...
काठमाडौ : काठमाडौ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न थालेको दुई हप्ता पुगेको छ । काठमाडौ उपत्यकामा चैत्र १५ गते पहिलो दिन ४ करोड लिटर पानी वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि साढे ६ करोड लिटर हुँदै अहिले दैनिक साढे ८ करोड लिटर वितरण गरिरहेको काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले जनाएको छ । काठमाडौमा वितरण गर्ने भन...